धेरै पानी पिउनेहरु सावधान ! हुनसक्छ खतरा, शरीरलाई कति पानी चाहिन्छ ? « Canada Nepal
धेरै पानी पिउनेहरु सावधान ! हुनसक्छ खतरा, शरीरलाई कति पानी चाहिन्छ ?
गर्मी मौसममा घाममा हिँड्दा तिर्खा लाग्नु स्वभाविक हो । तिर्खा लागेपछि त्यसलाई मेटाउन पानी पिइन्छ । पानी शरिरकालागी अत्यावश्यक छ । त्यसो भए पानी धेरै खाँदा हुन्छ त ?
फ्लोरिडा विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेको कलेज अफ हेल्थ एण्ड ह्युमन पर्फमेन्सले पहिले गरेको एक अध्ययनमा म्याराथोन तथा ट्राइएथ्लेटहरुमा वाटर इन्टोक्सिकेसन वा हाइपोएटर्मिया नामक समस्या देखा पर्ने गरेको उल्लेख छ । करिब १८ प्रतिशत धावक र साइकल चालकलाई यो समस्या देखापर्ने गरेको अध्ययनमा पाइएको छ ।
खेलाडीहरु कुद्ने क्रममा धेरै मात्रामा पानी पिउने गर्छन् । जसले रगतमा प्लाज्माको मात्रा वृद्धि हुन्छ । प्लाज्माको मात्रा वृद्धि हुदाँ रगतमा भएको नुनको मात्रामा कमी आउँछ । रेसमा कुद्दा शरीरमा भएको नुन पसिनाको माध्यमबाट खर्च भएको हुन्छ । जसले शरीरमा नुनको मात्रा न्यून हुन पुग्छ । जब नुनको मात्रा शरीरमा कम हुन थाल्छ, शरीर र मष्तिस्क बीच सम्पर्क टुट्न थाल्छ । मुटु पनि असामान्य रुपमा काम गर्न थाल्छ । अन्ततः विस्तारै शरीरका माशंपेसीहरुले सही रुपमा काम गर्दैनन् ।
धेरै पानी पिउँदा शरीरमा केही असामान्य क्रियाकलाप देखा पर्दछ । जब मानिसले अत्याधिक पानी पिउँछ, शरीरलाई चाहिने इलेक्ट्रोलाइट निस्क्रिय हुन्छ । जसले मुटुको धडकनलाई असर पुर्‍याउँछ । यसको उपचार गरेन भने मानिस कोमामा पनि जान सक्छ । कहिलेकाहीँ यसले मानिसको ज्यान पनि लिन सक्छ ।
जसरी चिनी धेरै खायो भने तितो हुन्छ भन्ने मान्यता छ त्यसैगरी लाभदायक छ भन्दैमा पानीको धेरै सेवन गर्नु ठीक हुँदैन । तर यसको मतलब कम पिउनुपर्छ भन्ने होइन । सही मात्रामा पानी पिउने गर्नुपर्छ । औसतमा शरीरलाई दैनिक १२ ग्लाससम्म पानी चाहिन्छ ।
प्रकाशित मिति : बैशाख २७, २०७९ मंगलबार ११ : ४४ बजे
१२ वर्षपछि इन्दिराको पछ्यौरी
जसपाको केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै
शेखर कोइरालाको भेला जारी
दोस्रो विश्वयुद्धमा असाधारण बहादुरी देखाएका हर्शेल रहेनन्
महिनावारीमा प्याडको सट्टा पुरानो कपडाको प्रयोग गर्दा हुन्छ ?
दिनको २ मिनेट समय दिए घरमा सजिलै फल्छ गोलभेडा